आँधीखोलालाई नमुना बनाउन लागेका एक निष्ठावान् कर्मचारीको समाजसेवा - नेपालबहस
आँधीखोलालाई नमुना बनाउन लागेका एक निष्ठावान् कर्मचारीको समाजसेवा
| १९:२०:५१ मा प्रकाशित
१६ फागुन, स्याङ्जा । स्याङ्जा जिल्लाको आँधीखोला गाउँपालिका वडा नं ५ सेतीदोभान स्थायी घर भएका जयराम पौडेल पेशाले निजामती कर्मचारी हुन् । उनी हाल पोखरा महानगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख (उपसचिव) हुन् । उनी सदाचारी कर्मचारीका रूपमा जति चिनिन्छन्, त्यो भन्दा बढी एक सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छन् ।
स्याङ्जा जिल्ला आँधीखोला गाउँपालिकाको सामाजिक विकास तथा विभिन्न योजना परियोजनाहरू निर्माणमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । खासगरी आँधीखोलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा उनले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । उनकै नेतृत्वमा आँधीखोलामा ‘मानवीय विकास तथा दिगो पूर्वाधार : समुन्नत समाज निर्माणको आधार’ भन्ने मूल सोचका साथ बीस वर्ष अगाडि नै ‘आँधीखोला विकास तथा वातावरण स्वच्छता समूह’ (GARDEN) नामक संस्था स्थापना गरेर विभिन्न मानवीय विकास र वातावरणसँग सम्बन्धित कामहरू भएका छन् ।
आँधीखोला क्षेत्रमा खासगरी सेतीदोभान आसपासमा बिरामीहरूका लागि उपचारको समस्या थियो । वर्षेनी सुत्केरी व्यथाले महिलाहरूले ज्यान गुमाउनुपथ्र्याे । इमर्जेन्सी सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्दा मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति थियो । पोखरासम्म उपचारको क्रममा लैजाँदा बाटैमा ज्यान गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थले धेरैलाई नमिठो अनुभूति गराउँथ्यो । यो समस्यालाई राम्रोसँग बुझेका पौडेलको मनमा सेतीदोभानमा एउटा सामुदायिक अस्पताल खोल्ने योजना बन्यो ।
नयाँ पुस्तामा देखिएको नैतिकताहिन संस्कृति र बिग्रँदो मानवीय सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्न र आदर्श संस्कारको विकास गरी आरोग्यता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ध्यान साधना केन्द्र सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । उनकै पहलमा बजेट परेका बृहत् सेतीदोभान : एक घर एक धारा खानेपानी योजना, बराहे हरित पार्क, भुद्रुमपोला सामुदायिक होमस्टे योजनाहरू हाल कार्यान्वयनका चरणमा रहेका छन् ।
आखिर ‘जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय’ भनेझैं उनी पवित्र भावनाका साथ अस्पताल निर्माण गरिछाड्ने अभियानमा एकोहोरिएर लागे । उनको योजना सफल हुने दिशामा अगाडि बढ्यो । सामुदायिक अस्पताल खोल्ने उद्देश्यले उनकै नेतृत्वमा वि.सं.२०६६ सालमा महायज्ञ सम्पन्न भई सो महायज्ञबाट सङ्कलित रकमबाट छ रोपनी जग्गा खरिद गरी आँधीखोला सामुदायिक अस्पतालको पूर्वाधार तयार पार्ने काम गरियो । उनकै नेतृत्वमा स्थानीय समाजसेवीहरूको महत्वपूर्ण योगदानका कारण भौतिक स्रोत सम्पन्न सामुदायिक अस्पतालको निर्माण सम्भव भयो । यस क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुदान ल्याउन उनले निकै ठूलो दुःख गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
आखिर अहिले उनको परिकल्पना साकार हुने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । सुरुमा (GARDEN) द्वारा सञ्चालित आँधीखोला सामुदायिक अस्पताल अहिले सरकारको घोषित नीति ‘एक पालिका : एक अस्पताल’ अन्तर्गत सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सरकारले यसमा छिट्टै करिब नौ करोडको भवन बनाउने भएपछि उनको दश वर्ष अगाडिको सपना साकार हुनै लागेको छ । यसले उनलाई निकै सन्तोष मिलेको छ ।
तर उनको समाजसेवाको कर्म भने यत्तिकैमा रोकिएको छैन । उनकै नेतृत्वमा र स्थानीयहरूको सक्रियतामा दोस्रो पटक महायज्ञ सम्पन्न गराई ध्यान साधना केन्द्र खोल्ने उद्देश्यका लागि करिब १४ रोपनी जग्गा (दान र खरिदबाट) समुदायलाई प्राप्त भयो । नयाँ पुस्तामा देखिएको नैतिकताहिन संस्कृति र बिग्रँदो मानवीय सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्न र आदर्श संस्कारको विकास गरी आरोग्यता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ध्यान साधना केन्द्र सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । उनकै पहलमा बजेट परेका बृहत् सेतीदोभान : एक घर एक धारा खानेपानी योजना, बराहे हरित पार्क, भुद्रुमपोला सामुदायिक होमस्टे योजनाहरू हाल कार्यान्वयनका चरणमा रहेका छन् ।
उनले आफूले पढेको विद्यालय ‘प्रद्युम्न पनेरू माध्यमिक विद्यालय’ को शैक्षिक उन्नतिमा समेत ठूलो योगदान पु¥याएका छन् । प्रद्युम्न पनेरू माध्यमिक विद्यालय स्थापना भएदेखि नै वि.सं. २०४६ सालको एस.एल.सी परीक्षामा सर्वप्रथम प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरी ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएका उनले एस.एल.सी. परीक्षा दिएपछि आफूले पढेको उक्त विद्यालयमा तीन महिना स्वयम्सेवक (अवैतनिक) शिक्षकका रूपमा सेवा गरे । बाबुआमाका नाममा सबैभन्दा पहिलो औपचारिक अक्षयकोष ‘भागिरथी गङ्गा अक्षयकोष’ स्थापना गरी विद्यालयका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कार दिने अभियानको सिलसिला सुरु गरे ।
२०६८ सालमा २० हजार बिउ पूँजी राखी आजीवन मासिक १ हजार जम्मा गर्ने शर्त रहेको उक्त अक्षयकोषमा हाल रु. १ लाख २८ हजार जम्मा भैसकेको छ । उनले औपचारिक रूपमा अक्षयकोष सुरु गरेपछि विद्यालयमा अक्षयकोषको बाढी नै आयो, जसका कारण विद्यालयको अक्षयकोषमा रु. ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी प्राप्त भइसकेको छ । यसरी स्थापना भएका विभिन्न अक्षयकोषहरूलाई व्यवस्थित बनाउन उनकै नेतृत्वमा ‘अक्षयकोष व्यवस्थापन विनियमावली २०७१’ बनाई सबै अक्षयकोषको छाता संस्थाको रूपमा ‘प्रद्युम्न पनेरू माध्यमिक विद्यालय अक्षयकोष’ स्थापना भयो । उनकै सक्रियतामा विद्यालयमा पूर्व विद्यार्थी मञ्च स्थापना भई आफै संस्थापक अध्यक्ष भएर उनले विद्यालयका विविध गतिविधिसहितको ‘मुखपत्र’ प्रकाशित गर्ने कामको समेत नेतृत्व गरे ।
उनी जहाँजहाँ जान्छन्, त्यहाँ त्यहाँका ‘सेटिङ’ भत्किन्छन् । उनले हालसालैमात्र पोखरा महानगरपालिकाको डुब्नै लागेको करोडौंको राजस्व उठाउने अभियानको सफल नेतृत्व गरे । यस क्रममा उनको सर्वत्र प्रशंसा समेत भयो । उनले लोभ गरेको भए व्यक्तिगत रूपमा ‘सेटिङ’ अनुसारको भागवण्डा पाउँथे होला, तर ‘शून्य सहनशीलता’ का पर्याय पौडेलले राज्यको एक असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गरे ।
निजामती क्षेत्रमा सादगी र सदाचारी व्यक्तित्वका रूपमा पौडेल चर्चामा छन् । धेरैले उनलाई ‘आँखामा राखे पनि नबिझाउने’ पात्रका रूपमा सम्झन्छन् । उनको निजामतीको जागिरे जीवनले रजत वर्ष पुरा गरिसकेको छ । वि.सं. २०५२ सालमा जिल्ला वन कार्यालय मनाङमा रेन्जर पदमा स्थायी नियुक्ति पाई जिल्ला वन कार्यालय बाग्लुङ, वन तालिम केन्द्र पोखरा आदि विभिन्न ठाउँमा गरी एघार वर्ष उनले वन सेवामा बिताए । वन सेवामा हुँदा पनि उनले प्रंशसनीय काम गरेको उनका सहकर्मी तथा सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।
वि.सं. २०६३ सालमा उनी लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई लेखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाग्लुङमा पदस्थापना भएबाट उनको जागिरे जीवनको दोस्रो मोड सुरु भयो । उनी वि.सं. २०७३ सालमा उपसचिव (लेखा) पदमा बढुवा भए । त्यसपछि उनी स्याङ्जा हुँदै हाल पोखरा महानगरको वित्तीय महाशाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् ।
पौडेलले जागिरको दौरानमा तिन वटै सरकार (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) का मातहतमा रहेर फरक फरक अनुभव प्राप्त गर्ने मौका पाए । उनले जागिरका क्रममा सरकारी कार्यालयमा हुने गरेका बेथिति र विसङ्गतिका विरुद्ध आवाज उठाए । उनी जहाँजहाँ जान्छन्, त्यहाँ त्यहाँका ‘सेटिङ’ भत्किन्छन् । उनले हालसालैमात्र पोखरा महानगरपालिकाको डुब्नै लागेको करोडौंको राजस्व उठाउने अभियानको सफल नेतृत्व गरे । यस क्रममा उनको सर्वत्र प्रशंसा समेत भयो । उनले लोभ गरेको भए व्यक्तिगत रूपमा ‘सेटिङ’ अनुसारको भागवण्डा पाउँथे होला, तर ‘शून्य सहनशीलता’ का पर्याय पौडेलले राज्यको एक असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गरे । एउटा वफादार कर्मचारी तथा आदर्श राष्ट्रसेवकको भूमिका निर्वाह गरे ।
विज्ञान र अध्यात्मलाई जोड्ने हो भने मात्र जीवन सोचेजस्तो हुने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘जीवनको उद्देश्य पढ्नु, पैसा कमाउनु, घर बनाउनु, बिहे गर्नुमात्र होइन, जीवनको सार्थकता यी भन्दा बाहिर छ, यी सबैभन्दा पर मानव सेवामा नै जीवनको मूल सन्तुष्टि छ । निस्वार्थ भावले मानव सेवा र समाजसेवामा लाग्दामात्रै सही अर्थमा सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ ।’
उनले धेरै कर्मचारीसँग सङ्गत र सहकार्य गरे तर उनीसँग सङ्गत र सहकार्य गर्नेहरूले उनलाई सत्पात्रका रूपमा नै बुझे । धेरै कर्मचारीको नजरमा उनी ‘आँखामा राखे पनि नबिझाउने पात्र’ हुन् । उनी भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनुपर्छ, राज्यलाई ठगेर भए पनि धनी बन्नुपर्छ भन्ने कथित ‘पूँजीवादी’ मान्यताका सशक्त विरोधी व्यक्ति हुन् । उनी सुशासनका पक्षमा सधैं दृढ भएर उभिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘राज्य धनी भयो भने व्यक्त स्वतः धनी हुन्छ, व्यक्ति धनी हुने राज्य गरिब हुने हो भने व्यक्तिले कमाएको धनको कुनै मूल्य हुँदैन । राज्यप्रति सबै नागरिक इमानदार भावमा प्रस्तुत हुने हो भने भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ । तर यसका लागि मानिसको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ ।’
ज्ञान, विज्ञान, प्रविधिको क्षेत्रमा समेत उत्तिकै अब्बल मानिने पौडेल अध्ययनशील छन् । उनी प्रत्येक नयाँ कुरामा ‘अपडेट’ भइहाल्छन् । नयाँ नयाँ ज्ञानका क्षेत्रमा उनको विशेष रुचि छ । भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्नका लागि असल व्यक्तिगत सोच चाहिन्छ; सकारात्मक सोचको विकास आध्यात्मिक मार्गबाट मात्रै सम्भव हुने उनको धारणा छ ।
जिब्रोको स्वादको पछि लागि जीवन बर्बाद गर्ने प्रत्येक मान्छेलाई जीवनको स्वाद दिलाउनका लागि योग र ध्यान जरुरी भएको उनी बताउछन् । विज्ञान र अध्यात्मलाई जोड्ने हो भने मात्र जीवन सोचेजस्तो हुने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘जीवनको उद्देश्य पढ्नु, पैसा कमाउनु, घर बनाउनु, बिहे गर्नुमात्र होइन, जीवनको सार्थकता यी भन्दा बाहिर छ, यी सबैभन्दा पर मानव सेवामा नै जीवनको मूल सन्तुष्टि छ । निस्वार्थ भावले मानव सेवा र समाजसेवामा लाग्दामात्रै सही अर्थमा सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ ।’
मुम्बाई अस्पतालकाे आगलागीमा परी ९ जनाको मृत्यु ४ हप्ता पहिले
दमक अस्पतालबाट नाक, कान, घाँटीको शल्यक्रिया शुरु ४ हप्ता पहिले
मकवानपुरगढीमा कोभिड अस्पताल सञ्चालन १ महिना पहिले
चिकित्सकको अभावमा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन १ महिना पहिले
बेनी अस्पतालको सबै शय्यामा पाइपबाट अक्सिजन आपूर्ति १ महिना पहिले
आकस्मिक सेवासहित नगर अस्पताल सञ्चालनमा १ महिना पहिले
आजदेखि पशुपति क्षेत्रका सबै मन्दिर बन्द ६ मिनेट पहिले
कोभिड खोप लगाएका र पहिले पनि संक्रमण देखिएका वीर अस्पतालका १५ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित १० मिनेट पहिले
बिरामीका लागि कर्णालीमा एम्बुलेन्स र हेलिकोप्टर व्यवस्था १२ मिनेट पहिले
भेषभूषामा सजिएका आमा समूह १५ मिनेट पहिले
गोरखामा नगद चोरी गरी फरार युवक पक्राउ १९ मिनेट पहिले
दुधौलीका तीन वडा एक हप्ताका लागि बन्द २२ मिनेट पहिले
फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ २५ मिनेट पहिले
२४ वर्षपछि सडक कालोपत्र हुँदा स्थानीयमा खुशी २८ मिनेट पहिले
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आब्हान ४२ मिनेट पहिले
पूर्व सभापति न्यौपानेको निधनमा डा.शेखरद्वारा दुःख व्यक्त ४३ मिनेट पहिले
राजविराज विमानस्थल दुई साताका लागि बन्द ४३ मिनेट पहिले
आज बिहानैदेखि भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्ड अवरुद्ध ४५ मिनेट पहिले
जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको बीचमा पर्ने रिम्ना र चाइना बगर ४६ मिनेट पहिले
पातारासी हिमालको काखमा स्याउ बगैँचा ५० मिनेट पहिले
बिक्रीका लागि राखिएका स्थानीय उत्पादन २३ घण्टा पहिले
रिक्त राष्ट्रियसभा पदपूर्तिका लागि जेठ ६ गते उपनिर्वाचन १६ घण्टा पहिले
पालिका मुकाममै सडक साँघुरा १८ घण्टा पहिले
नेपालले दियो मलेसियालाई विशाल लक्ष्य २१ घण्टा पहिले
नेपाल महिला चेम्बरको अध्यक्षमा निरन्तरता पाउने श्रेष्ठ को हुन् ? ५ दिन पहिले
काठमाडौं उपत्यकामा हल्का असिना पानी ७ दिन पहिले
भूकम्पले क्षतिग्रस्त पाटन विद्यालयको पुननिर्माण सम्पन्न ४ दिन पहिले
भिँडाबारी डाँडागाउँ जोड्ने गरी इदी खोलामाथि निर्माणाधीन पुल ४ दिन पहिले
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण फैलिएपछि कडाइ, जथाभावी थुक्न नपाइने ३ दिन पहिले
लुटपाटको आरोपमा तीन जना प्रकाउ ३ दिन पहिले
रात्रीकालिन व्यवसायमा रोक लगाउने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय ४ दिन पहिले
कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा–बलेवा खण्ड मर्मत ५ दिन पहिले
चलचित्र ‘प्रेमगञ्ज’ को मुख्य भूमिकामा बेनिशा ३ हप्ता पहिले
नेपाल पक्षका सांसद पदमुक्त गर्दा ओलीलाई सत्ता जोगाउन झनै गाह्रो २ दिन पहिले
प्रम ओलीबाट नवनिर्मित पाटन माविको साँचो हस्तान्तरण ४ दिन पहिले
प्रसाईप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न डा. शेखर झापामा ४ हप्ता पहिले
अरुण भ्यालीले वैशाख ६ गतेबाट हकप्रद निष्कासन गर्दै, प्रतिशेयरमूल्य कति ? ३ हप्ता पहिले
भजनीका किसान चैते धान गोड्दै २३ घण्टा पहिले
चार करोडको लागतमा वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न ४ महिना पहिले
बाक्लो हुस्सुसँगै शीतलहरले जनजीवन कष्टकर १ वर्ष पहिले
प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने आयोगको निर्णय ३ महिना पहिले